Igwe akwa igwe
Ebe ịkwa akwa na-arụ ọrụ
Bartack na ụkpụrụ ịkwa akwa
Button na pearl attaching
Igwe ịkwa akwa pụrụ iche
Igwe ọkụ ọkụ ọkụ
A ire ere igwe: akpaka n'akpa uwe welting igwe
Ọrụ ga-abụ ihe kachasị ọnụ n'ọdịnihu. Akpaaka na-edozi nsogbu akwụkwọ ntuziaka, ebe ọnụọgụgụ na-edozi nsogbu njikwa. Ọgụgụ isi n'ichepụta ihe bụ nhọrọ kacha mma maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ngwa akụrụngwa akpaaka anyị, 4 ntụziaka n'otu oge mpịachi akpa, mpịachi na ịkwa akwa ...
Ohere maka igwe kpo oku igwe na 2021
Mgbe ụlọ ọrụ igwe na-akwa akwa nwetara "ịdị jụụ" nke afọ gara aga, afọ a ahịa wetara mgbake siri ike. Iwu ụlọ ọrụ anyị na-aga n'ihu na-abawanye ma anyị maara nke ọma na mgbake ahịa ahụ. N'otu oge ahụ, ọkọnọ nke mgbada ihu ...
Onye Nzọpụta nke ụlọ ọrụ akwa: Onye na-etinye akpa n'akpa uwe dị elu
site ha na 20-12-30
TS-199 usoro ihe ntinye n'akpa uwe bu igwe eji agba oso uzo di elu maka akwa akwa. Igwe ihe ntinye ndị a nwere oke ịkwa akwa ma kwụsie ike. E jiri ya tụnyere mmepụta akwụkwọ ntuziaka ọdịnala, arụmọrụ ọrụ na-abawanye site na 4-5 ugboro. Otu ...
World mbụ: Automatic Laser n'akpa uwe Welting wingkwa Akwa Machine
You ka na-echegbu onwe gị maka ịchọta onye ọrụ nwere nkà? Ka na-echegbu onwe gị maka ịrị elu ụgwọ ọrụ? Are ka na-eme ọsọ ọsọ ka iwu ga-agwụ? The ka na-enwekarị mgbagwoju anya na ịdị nwayọ nke ịcha akwa maka akpa? Companylọ ọrụ anyị adịbeghị anya d ...
Agbaze fụọ mmepụta
Company wuru a ọhụrụ ụlọ mmepụta ihe na kwukwara 20 gbazee fụọ mmepụta edoghi, na a kwa ụbọchị mmepụta nke 15 tọn. Ugbu a, anyị nwere otu ndị ọrụ aka siri ike, na-egbo mkpa nke mba dị iche iche maka USES nke nkpuchi dị ka mkpa dị iche iche nke ndị ahịa dị iche iche maka cus ...
Non-kpara akwa ma gbazee fụọ fabric mmepụta
site ha na 20-07-08
Anyị ụlọ ọrụ na-akwado Changying na-abụghị kpara akwa Co., Ltd ntọt mmepụta edoghi. Ugbu a, kwa ụbọchị mmepụta nke na-abụghị kpara akwa bụ 10 tọn, na mmepụta nke gbazee fụrụ ákwà bụ 3 tọn. Nditịm nyochara niile ngwaọrụ, Quality-gbakwasara si isi ihe na-masterbatch.
Masklọ Ahịa Nkpuchi
N'oge oke coronavirus na China, ụlọ ọrụ anyị natara ntuziaka sitere n'aka gọọmentị iji mepụta igwe nkpuchi na ihe nkpuchi. Companylọ ọrụ anyị na-ahazi ndị ọrụ aka ọrụ ngwa ngwa iji mepụta R & D na mmepụta. Ihe nkpuchi anyị mepụtara eruola ogo kachasị elu na ihe ...
Topsew Automatic wingkwa Akwa Equipment Co., Ltd.
site ha na 20-02-20
Ruo ọgwụgwụ nke 2019, anyị nwere zuru akara nke n'akpa uwe setter igwe, bartack ụkpụrụ ịkwa akwa igwe, Nwanna ụdị ịkwa akwa igwe, Juki ụdị ụkpụrụ ịkwa akwa igwe, Button snap, na pearl attaching igwe, na ndị ọzọ dị iche iche nke akpaka akwa akwa igwe. 1. N'akpa uwe setter igwe: 199 usoro n'akpa uwe ...
Na Middle Of Nov, Anyị gara America Nnọchiteanya N'ihi Automatic n'akpa uwe Ọzụzụ
Ọzụzụ gụnyere: 1. otu esi eme mmemme. 2. Olee otú gbanwee usoro ihe omume. 3. esi gbanwee clamps ma dozie igwe maka akpa jeans, mgbe nke ahụ gasịrị, anyị na-akụziri ha ka esi agbanwe mpempe akwụkwọ ma dozie igwe maka akpa uwe. 4. Otu esi edozi nsogbu ahụ mgbe ...
Na Ọgwụgwụ nke Nov, 2019, Anyị gara Bangladesh Customer's Factory For Automatic Pocket Setting Machine Training.
Tupu ha ejiri otu igwe igwe eji aba n’akpa uwe, ma tinyezie igwe akpaka n’akpa uwe. Ugbu a, jiri igwe akụrụngwa igwe anaghị akwụ ụgwọ, nwere ike ịchekwa onye ọrụ, yana oge. Ahịa ahịa ẹkesikpede na-amụta ike. Mgbe ha na-amụ ihe, ha na-edekọkwa ihe. Ndị ọkachamara dị nnọọ nkọ. Mgbe sev ...
No.1 Yewang ụzọ, Yexie obodo, Songjiang district, Shanghai, China